संसारकै सबैभन्दा कम उमेरका सेफ, जसले मच्चाइरहेका छन् संसार भर तहल्का (भिडियो हेर्नुस्) – Wow Sansar
January 6, 2021 66
एजेन्सी । यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो अत्याधिक भाइरल बनिरहेको छ । भिडियोमा एक वर्षका बालक खाना बनाइरहेको देख्न सकिन्छ । उनको नाम हो कोबी । उनी अमेरिकाको भर्जिनियाका बासिन्दा हुन् । उनी सोसल मिडियामा खाना बनाउने विभिन्न नयाँ तरिका शेयर गरिरहेका हुन्छन् । जसको भिडियो सोसल मिडियामा अत्याधिक मन पराइएको पनि छ ।
उनको कोबी ईट्स नामक एक इन्स्टाग्राम अकाउण्ट पनि रहेको छ । जसमा २५ लाख भन्दा धेरै फलोअर्स छन् । अकाउण्ट भने उनका आमा बुवाले म्यानेज गरेका छन् । उनको एक यूट्युब च्यानल पनि छ । जसमा लाखौँ सब्स्क्राइब रहेको छ । उनको यो खाना पकाउने कलालाई देखेर उनका फ्यानहरु अचम्मित परेका छन् । आफु खाँदै र पकाउँदै गर्ने उनको कुकिंग गनेए स्टाईलले उनका फ्यानहरुलाई मोहीत बनाएको छ ।
बच्चा उमेरमै उनी यस्ता प्रतिभाका छन् भने पछि ठूलो भएपछि झन कस्तो होलान् यो कुराको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनलाई यसरी खाना पकाउनमा उनका आमा बुवाले सहयोग गर्ने गर्छन् ।
आफ्नो छोरालाई खाना पकाउनमा रुची भएको थाहा पाएर उनका आमाबुवाले उनलाई किचेनको जिम्मा नै लगाउने गर्छन् । उनी पनि खाना पकाउन पाउँदा निकै नै खुशी हुन्छन् । उनको यो कुकिंगलाई हेरेर धेरै बालबालिकाहरु र अभिभावकहरु प्रभावित बनेका छन् । भिडियोसहित
Prevफेरि बढ्यो सुनको मूल्य
Nextधन कमाउन मलेसिया आएका ठाकुर र बोगटी स्वदेश फर्किए ह्वीलचियरमा।
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3288)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1316)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1112)
एक जोडीले लिएका थिए होटलमा कोठा, लामो समयसम्म बाहिर निस्किएनन्, कोठामा जाँदा कर्मचारीहरु चकित (684)
होटेल रुद्रमा प्रहरीले छापा मार्दा हाई प्रोफाइल कल गर्लसहित भीआईपी भेटिएपछि… (636)